Xayiraadda Flash ee Dhammaan daalacashada
Steve Jobs wuxuu ahaa xaq u. Qofka ugu horeeya ee igula taliyay inaan helo Flash block wuxuu ahaa Blake Matheny. Blake waa mid ka mid ah injineerada ugu fiican ee aan waligey ku raaxeysto inaan la shaqeeyo - labadiisana waan la soo shaqeeyay Isku-darka iyo at ChaCha. Waxaad u maleyn laheyd inaan dhageysan lahaa nin badalay dhamaan kaabayaasha dhaqaalaha iyo madasha ugu yaraan laba shirkadood oo tiknoolajiyado kala duwan ah.
Ma dhagaysan isaga. Waxaan iska sii waday daba-galka… anigoo adeegsanaya Chrome iyo Firefox iyo daawashada bogagga barafoobay, is-taagay, ama xitaa qufulka laptop-ka si ku-meelgaar ah u xiray. Mararka qaarkood, waa inaan dilaa biraawsarada.
Toddobaadkii hore, waxaan kulan qurux badan la yeeshay Michael Cloran Magaalada Horumarinta. Michael wuxuu soo aruuriyay kuwa ugu fiican kan ugu fiican dhanka hibo soosaaraha bilowgiis his oo qiyaasa maxay? Dhamaantood waxay isticmaalaan flash blockers. Wuxuu ii sheegay inuu dhawaan bilaabay inuu isticmaalo mid waana wax layaableh sida deg degta ah ee boggaga loo bixiyo iyo dhibaatooyinka yar ee soo maray.
Marka, Talaadadii waxaan go aansaday inaan tijaabiyo. Waxaan ku raray qalab xannibma qalabka 'Chrome'. Jannada ayaan toddobaadka oo dhan ku jiray. Wax walba si dhakhso leh ayey u rartaan, waxba ma barafoobaan, kamana maqna khibradda Flash-ka gebi ahaanba. Waqti ka waqti, waxaan u baahanahay Flash markaa xannibayaashu waxay ii oggolaanayaan inaan si fudud u dhajiyo qaybta Flash-ka oo ay kor u kacdo. Intaa waxaa sii dheer, waan si sax ah u gujin karaa (tusaale Youtube) oo aan dooran karaa inaan markasta u oggolaado Flash inuu ka soo raro goobta.
Haddii aad isticmaaleysid biraawsar kale, waxaad leedahay ikhtiyaarro:
Firefox - Flashblock ku darso.
Safari - GujiToFlash.
IE 7 - Xayeysiinta Xayeysiinta wuxuu leeyahay xannibaadda Flash.
IE 8 - wuxuu leeyahay wax ka badal lagu daarto per-site Flash xayiran.
Waxaad layaabi laheyd inta goobood ee adeegsada Flash. Waxaan dareemayaa in qaar ka mid ah milkiilayaasha bogagga aysan xitaa ogaanin. Waqti ka waqti, waxaan culeys saarayaa balooggan mana aanan ogeyn in 3 xayeysiis ay ku imaanayaan Flash. Waxba ma jiraan olaga iyaga ku saabsan… laakiin halkaas ayay joogaan!
Waa tan tusaale muuqda, Digniinta Digniinta goobta oo aan lahayn iyo Flash. Ku carqaladaynta tooshka ayaa iftiiminaya oo gujinaya waxay ku socotaa moduleka Flash.
Maaddaama HTML 5 ay run noqonayso, Adobe runtii wuxuu u baahan yahay inuu helo laakiin wuxuu ku jiraa qalab dib loogu dhisayo Flash-ka dhulka. Ma jecli inaan ku heshiiyo Steve Jobs, laakiin xaaladdan wuu ku dhintay. Shirkadaha mustaqbalkooda ku dhajinaya Flash, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad hesho qorshe kayd ah. Haddii aadan arag HTML 5, Apple wuxuu leeyahay a banaanbax weyn… In kastoo ay kaaga baahan yihiin inaad isticmaasho Safari si aad u daawatid.
Tags: xayeysiiyaha xayeysiintaadobe flashdigniinta qasrigablahen mathenyChachagujiisugeynflashxannibaadper-site xayiraadda flashshaqooyinka steve